Ura na-eme mgbe ị gaghị ehi ụra
Paolo Tescione	Edere ya November 12, 2020 November 12, 2020
Mgbe ị na-apụghị ihi ụra
N'oge nchegbu, mgbe ị nweghị ike ịchọta udo nke obi ma ọ bụ zuru ike na ahụ, ị ​​nwere ike ịgakwuru Jizọs.
Jehova wee zaa, sị, "Ọbịbịa m ga-eso gị gaa, m ga-emekwa ka i zuru ike." Ọpụpụ 33:14 (NIV)
Ọ na-esiri m ike ihi ụra n'oge na-adịbeghị anya. Anọ m na-eteta n’isi ụtụtụ, ogologo oge tupu m bilie ịga ọrụ. Uche m bidoro gbaa oso. Ana m echegbu onwe. M na-edozi nsogbu. M na-atụgharị ma na-atụgharị. N’ikpeazụ, n’ikpeazụ, ike gwụrụ m. N’ụtụtụ ụtụtụ, m tetara n ’elekere anọ iji nụ ka ebe mkpofu ahịhịa na-agba n’okporo ámá anyị. N'ịghọta na anyị echefuola iwepu mkpokọta dị iche, m si n'àkwà m bilie, tinye akpụkpọ ụkwụ mbụ m hụrụ. M si n'ọnụ ụzọ pụọ ma jide nnukwu ite na-emegharị ihe ọzọ. Na ụkwụ m na-aga n'okporo ámá, echere m ụkwụ m ma tụgharịa nkwonkwo ụkwụ m. Ọ dị njọ. Otu nke abụọ, m nọ na-ewepụ ahịhịa. . . ọzọ m dinara n'etiti osisi anyị na lavender shavings, na-ele kpakpando. Echere m, Ọ bụrụ na m dina n’elu akwa. Ekwesịrị m.
Ezumike nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike. Nchegbu ndị ezinụlọ na-enwe nwere ike ime ka anyị mụrụ anya n’abalị. Ihe isi ike na nrụgide a na-enwe n'ọrụ anyị nwere ike ịnapụ anyị udo anyị. Ma mgbe anyị kwere ka nchegbu anyị gabiga anyị, ọ na-adịkarị obere njedebe nke ọma. Anyị na-agwụcha. . . mgbe ụfọdụ a na-ahazi ya n'ime ahihia lavender. Anyị kwesịrị ezumike iji rụọ ọrụ ma gwọọ. N’oge nchekasị ndị ahụ, mgbe ọ dịka n’anyị enweghị ike ịchọta udo nke obi ma ọ bụ zuru ike n’ime ahụ, anyị nwere ike ịgakwuru Jesu mgbe anyị nyere ya nchegbu anyị, anyị nwere ike ịchọta izu ike. Jizọs nọnyeere anyị. Ọ na-elekọta anyị ahụ, uche na mmụọ. Ọ na-eme ka anyị dinara ala ahịhịa ndụ nri. Ọ na-eduga anyị n’akụkụ mmiri dị jụụ. Weghachi nkpuru obi anyi.
Nzọụkwụ nke okwukwe: Were obere oge mechie anya gị, na-amara na Jizọs nọnyeere gị. Kesara Ya ihe nile na-echegbu gi Mara na Ya ga-elebara ha anya ma weghachi nkpuru obi gi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis gọziri ihe akpụrụ akpụ nke Our Lady of theyanu Medal
Next Post → Post ozo:Recordstali na-ede ihe karịrị otu nde ikpe coronavirus ka ndị dọkịta na-aga n'ihu na-egbochi mgbochi ahụ